I-Minus ubukhulu benyanga: kungenzeka kanjani
Impilo yabesifazane I-Psychology
Kuyaziwa ukuthi esinye sezimo ezibaluleke kakhulu ekunciphiseni isisindo ukulinganiswa kokudla okunomsoco kanye nokujwayeleka kwe-metabolism. Izindlela eziningi zokulahlekelwa isisindo kusho ukunamathela ekudleni okunempilo okungekho ukusetshenziswa kokudla okuphezulu kwekhalori, okungaholela ngisho nomuntu omuhle kakhulu esimweni esicindezelekile. Ngalesi simo kwakudingeka ngibhekane nazo. Isisindo esithile sanikezwa isimo se-postpartum: ama-kilogram eqoqwe ngesikhathi sokukhulelwa awazange ahambe, kodwa wanezelwa nsuku zonke.
Gwema isisindo ngaphandle kokulimaza empilweni
Ekuqaleni, ngazama ukudla, kepha ngemva kokuyeka ukudla okujwayelekile (ngangidla konke engangikufunayo ngaphandle kwemingcele), ngazizwa ngiyingozi, kokubili ngokomzimba nokuziphatha. Umzimba uhlulekile emsebenzini wezinzwa ze-cardiovascular, ne-nervous and digestive, ezibhekene nokucindezeleka okukhulu. Ngenxa yalokho - ukulahlekelwa amakhilogremu enzondo akuzange kusebenze, kwakukhona umuzwa wenqola kusuka kukho konke, kunanini ngaphambili injabulo yayixhunyiwe. Kulesi sikhathi esinzima kimi, nganquma ukuvakashela isikhungo sezokwelapha saseMoscow "Serso", ehlelwe yi-Academician S. Smelov. Isisekelo senqubo yesikhungo sihlanganisa ukujwayela kwe-metabolism, ushintsho oluphelele ekudleni okuvamile. Akufanele ukushiya ukudla, ngaleyo ndlela kudonsa umzimba wakho, futhi ukukhipha isisindo ngokukhululekile nangokuzinzile, ukuphila ngokugcwele. Abahlanganyeli kule mbono akudingeki bazibophe ngokwabo umzimba, bahlale bebala amakholori. Ngemva kokuzivakashela izikhathi ezimbalwa, ngiphawula ukuthi angisayikuzwa ukuwohloka kokuziphatha okuhle. Izinhlelo eziningi zokulungisa aziletha umphumela oyifunayo, ngoba izikhungo zesibindi ebuchosheni obangela ukubonakaliswa kwe-reflex yokudla azikwazi ukulawulwa yimithi. Indlela yokuphuma ayiyona imithwalo enzima emzimbeni noma ekungeneleleni okuhlinzekwayo, kodwa amasu angokwengqondo, okuthiwa isisindo se-psychocorrection.
Indlela yokulungiswa kwengqondo ngesisindo nguSmelov
Izinhlelo ze-Psycho-correctional zisekelwe ezenzweni zesayensi, ezimelela umthelela ezingqondweni zengqondo yesiguli futhi, ngokufanayo, umzimba ngokwawo. Isiphakamiso somlomo kanye nokusetshenziswa kwezenzo ezithile ezisiza ekufezeni umphumela wokwelashwa nomphumela oyifunayo. Umzimba uqala kancane kancane ukwakhiwa kabusha, ngenxa yokuthi ukwephula ukushintshaniswa kwamafutha kuqedwa, futhi ama-kilogram ayesekho. Uma umuntu esilinganisa, ngokushesha isisindo esingeqile sizohamba. Abaningi kulabo engangivakashele nabo esikhungweni sezokwelapha, baxosha izinyanga ezintathu cishe cishe ngamaphesenti angu-30 ebuningi bokuqala. Ngemuva kwezinhlelo ezimbalwa, ngizizwa ngempumelelo ukusebenza kohlelo lokulungisa, kodwa umgomo wami kwakuwukukhipha isisindo esitholakalayo ngesikhathi sokukhulelwa ngisho nokuzwa kakhudlwana njengowesifazane, ukugqoka izingubo zakho ozithandayo, ukubamba ukubukeka kwabanye. Osebenza naye emsebenzini wangeluleka ukuba ngijwayelane nesayithi http: // смеловпохудение.рф / nokuqeqeshwa okwenziwe yiS S. Smelov ofanayo, engaziwa yikhungo sezokwelapha "Serso". Akazange acabange okwesikhashana, njengoba lo muntu wasiza abantu abaningi ngesisindo sabo somzimba, ngaphandle kwalokho, ethuthuka phambili, wadala indlela entsha, ehamba phambili yokulahlekelwa isisindo ngokushesha nangempumelelo ngaphandle kokulimaza impilo nempilo.
Inqubo yesimanje ehlukile
Ngokusho kwesimiso esisha sikaSmelov, ungasheshe ulahlekelwe isisindo ekhaya. Awudingi ukuvinjelwa okuqinile emndenini, ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezikhethekile nemithi. Ukuqeqesha akusho ukuqhuba imithwalo yamandla evamile, lowo ohlanganyela kulolu hlelo uzosheshe alahlekelwe isisindo ngaphandle kokubhekana nokuhlukumeza ngokokuziphatha nangokomzimba. Futhi kwakubonakala ngempela: osebenza naye akazange abukeke nje kancane, kodwa futhi uyaqhenya, omncane. Kusukela kulo mphumela, ngijabule, ngoba umgomo wami oyifunayo - ukulahlekelwa isisindo ngosayizi owodwa ngenyanga - uye wangempela. Ukuqeqesha kuyindlela enhle yokuqeda ama-kilogram enzondayo kulabo abangenalo ithuba lokunakekela ekudleni ukudla okuphansi kwekhalori noma ukunciphisa inani lokudla elidliwe (umsebenzi osebenzayo, ukudla okudla ngehora).
Ukulahlekelwa okuyisisindo okusheshayo nokuphephile
Kufanele uqaphele izinhlelo zanamuhla zokulahlekelwa isisindo, ngoba inkinga yokuzicabangela ngokweqile manje iyasebenza, futhi iziqondiso eziningi ze-pseudoscientific kuphela zithembisa ukuphulukisa lesi sifo. Abaqeqeshi abahlukahlukene-izazi zengqondo kanye nalabo okuthiwa abaphilisa banikeza izinsizakalo zabo ngenani elikhulu, futhi ngenxa yalokho, abantu abazitholi izimpendulo zemibuzo yokulahlekelwa isisindo. Ngaphezu kwalokho, uma uvakashela "ochwepheshe" abanjalo, ungalimaza impilo yakho. Endabeni yami, angizange ngithole umphumela, ngoba i-Academician Smelov yaziwa ngokuhlangenwe nakho kwakhe okucebile ekusebenzeni esikhungweni sezokwelapha ezikhethekile.
Manje uhlelo lwakhe luye lwacwengeka futhi lujulile futhi lufezekisa umgomo ngosizo lwemithi ephumelelayo ngempela. Ukuqeqesha kuhloswe ukulahlekelwa kwesisindo esisheshayo: inyanga ungafinyelela imiphumela engakahleleki ngaphandle kokulimaza umzimba. Naphezu kobuciko bale mboni, abaningi bazizwa bephumelela ngokugcwele, behlala benelisekile ngokuphelele ngomphumela - amasonto amabili cishe ngo-8 kg!
Shintsha impilo yakho ibe ngcono - kulula!
Ukuthola isibalo esincane kanye nomzimba oqinile, akudingeki nje ukuthi ushintshe isimo sakho sengqondo ngokudla, ukudla ukudla okunomsoco nokuhlwabusayo, kodwa futhi ukusheshisa umzimba emzimbeni. Ukuvimbela ukudla okunomsoco ngesikhatsi kuzosiza ukuqeda amakhilogremu ambalwa okwesikhashana, ungeze izinkinga zempilo ezibalulekile futhi kubangele ukucindezeleka okukhulu.
I-Academician Smelov, esekelwe eminyakeni eminingi yokuhlangenwe nakho kwakhe ekusebenziseni izindlela eziphumelelayo zokulahlekelwa isisindo, yakha uhlelo lokuqeqesha, ngokungafani nakho konke okudlule. Siyabonga, ungasusa ama-deposit ngesikhathi esifushane, ngaphandle kokulimaza esiswini nasengqondweni. Wonke umuntu unelungelo lokulahla umthwalo ongadingekile nokuqeda izinkimbinkimbi nokwesaba!
Yini okudingeka ishintshe ekuziphatha ukushada
Ukuhlushwa kwabesifazane: isifo noma isimiso?
Lokho abantu abakucabangayo ngabesifazane abathandekayo
Ukuziphoqa ukuba ulahlekelwe isisindo, uma kungekho amandla
Ukuqinisekiswa kokuheha amadoda
Imikhuba engu-7 eletha ukuguga kwakho eduze. Ukunakwa, kuyingozi!
Ukucabanga okungabonakali kanye nezici zokuthuthukiswa kwayo
Ama-Cheesecake ngezithelo ezomile
I-Vitamin isiphuzo esivela ezitshalweni ezishisayo
Izakhiwo eziwusizo ze-cocoa
Imifino enelayisi nezinongo
Khetha izipho zokuqala ezivela kuLefutur
Inkosi yetafula lokugubha imfucumfucu igcwele irayisi nama-apula
Lishisa isisindo ngebhayisikili: mangaki amakhilogremu enza ibhayisikili lishise?
Bheka ukwesaba emehlweni akho
I-pizza encane kusuka emanzini okugcoba
Amaski ezinwele, iseluleko somuntu
I-Sandwich ngemizuzu engu-10
Indlela elula yokuyeka izipikili
Yakha umoya onempilo endlini
Ngokokuqala ngqa e-US, isizukulwane esisha samawele sazalwa, sakhulelwa ngokwezifiso
Izibhamu nesinamoni ne-buttermilk
Indlela yokuba nanny